HERO OF MYANMAR: မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ
မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ
[14:44 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
၁။ ဒီ မြန်မာအမျိုးသမီးကို ဘယ်သူက နိုင်ငံခြားသားနဲ့ အတင်းပေးစားတာလဲ??
၂။ ဒီအမျိုးသမီးက တိုင်းတပါးသား ယောင်္ကျားလေးတွေပေါ်မှာမှ ဘာဖြစ်လို့ ထိုင်ချင်ရတာလဲ?? လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဒါကိုပြောတာလား??
၃။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ဆွဲချင်သလို ဝိုင်းဆွဲခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီရချင်တာ ဒီလိုနေဖို့လား??
၄။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်သူက ကြယ်သီးဖြုတ်ခိုင်းတာလဲ?? ကြယ်သီးဖြုတ်တာ ဒီမိုကရေစီလား?? ၅။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ခုံပေါ်မှာ မထိုင်ခိုင်းတာလဲ?? လူ့သားချင်း အခွင့်ရေးတန်းတူဆိုတာ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ?? ၆။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ကန်တော့ခိုင်းတာလဲ?? ၇။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လက်အုပ်ချီခိုင်းတာလဲ?? ၈။ ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုရော ဘယ်သူက မာတုကာမ ပုံကို ဘုရားဘေးမှာ ထားပြီး ကန်တော့ခိုင်းတာလဲ?? ၉။ မြန်မာလူမျိုးချင်း လက်အုပ်ချီခံနေရတဲ့ ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးက ဘာဖြစ်လို့တိုင်းတပါးသားတွေကိုမှ လက်အုပ်ချီချင်ရတာလဲ?? လက်အုပ်ချီတာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလား?? ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကရော နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွေ့ချိန်တိုင်းမှာ လက်အုပ်ချီခဲ့လား?? ၁၀။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူအတင်းအိမ်ထဲခေါ်ပြီး ပြန်မလွှတ်တာလဲ?? ၁၁။ လွှတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကို ဘယ်သူတွေက အမြဲပြောပြီး ပြောတဲ့သူတွေကို ဘယ်သူတွေက ပါးစပ်လိုက်ပိတ်နေသလဲ?? ၁၂။ အမေရိကန်သည် ကိုးကွယ်စရာလား?? ၁၃။ အမေရိကန်ရဲ့ အကျင့်က ဘာလဲ?? ၁၄။ ဒီကပြားက ရဲ့ အကျင့်ကရော ??
၁၅။ ဒီမြေးဖိုး နှစ်ယောက်ကို ဒီလောက် ကွဲပြားသွားစေတဲ့ အဓိက တရားခံက ဘယ်သူလဲ ??
၁၆။ မြန်မာ့ အမျိုးသားဖခင်ကြီးရဲ့ မျိုးဆက်ကို မြန်မာနာမည်တွေနဲ့ အဆုံးမသတ်အောင် ဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲ?? ၁၇။ ဘုန်းကြီးတွေကို လမ်းဘေးသစ်ပင်မှာ စာရွက်ကပ်ပြီး ဆွမ်းခံကြွခိုင်းတာ ဘယ်သူလဲ?? ၁၈။ ဒီလူတွေက ဘယ်ကပိုက်ဆံတွေနဲ့ စားသောက်နေကြတာလဲ?? ၁၈။ ဒီလူတွေက ဘယ်က ပိုက်ဆံတွေနဲ့ စားသောက်နေကြတာလဲ?? ၁၉။ ဘာမှအသုံးမတည့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြည်သူတွေဆီ ညာရောင်းတာ ဒီလို စားသောက်ကြဖို့လား?? ၂၀။ ဘာမှ အနုပညာမပါတဲ့ ဒီပုံကို ပန်းချီကားပါဆိုပြီး မြန်မာ ပြည်သူတွေဆီကို လိုက်ရောင်းတာ စားဖို့သောက်ဖို့လား?? ၂၁။ လူငယ်တွေ ယောင်္ကျားလေးတွေ စုနေတာ ဈေးရောင်းခိုင်းပြီး ဝင်ငွေရှာဖို့လား??
၂၂။ ဒီလူတွေကို နေမပူ မိုးမရွာပဲ ဘယ်သူက ခမောက်တွေစောင်းခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်လား??
၂၃။ ဒီအဘိုးကြီးတွေကို ဘယ်သူက ပင်စင်မပေးသေးတာလဲ?? ၂၄။ ဒီအဖိုးကြီးတွေကို ဘယ်သူက အိမ်မှာ မအိပ်ခိုင်းတာလဲ??
၂၅။ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ ကန်တော့ခံချိန်ကလွဲပြီး တခြား ဘာမှ မလုပ်တတ်ကြတော့ဘူးလား??
၂၆။ ပင်စင်မယူသေးတာ ဝေစုတွေ ထပ်လိုချင်သေးလို့လား ??
၂၇။ ဒီအဖိုးကြီးကို ဘယ်သူက အိကျီအရောင်မျိုးစုံဝတ်ခွင့် ပိတ်ထားတာလဲ?? ၂၈။ ဒီလူတွေက တော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းတွေတဲ့လား?? ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လမ်းဘေးမှာ ထိုင်ခိုင်းထားတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်လား?? ၂၉။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက သူ့ဘာသူနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဖျက်ဆီးခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီ ရသွားရင် ဘာတွေထပ်ပြီး ဖျက်ဆီးအုံးမှာလဲ ?? ၃၀။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လမ်းဘေးအုတ်ခဲတွေ ထုချေခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီရဖို့ အုတ်ခဲတွေထုချေရလား?? ၃၁။ ဘာမှမသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေကို လက်ပတ်တပ်ပေးပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အမည်ခံပေးတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၃၂။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ?? ၃၃။ ဒီလူကြီးကို ဆိုက္ကားပေါ်မှာ ဘယ်သူအတင်း က ခိုင်းတာလဲ?? ၃၄။ လူသတ်လက်နက်တွေကိုင်ထားတဲ့ စစ်သည်တွေက မျက်နှာဖုံးတွေ ဘာလို့တပ်ထားကြတာလဲ?? ၃၅။ နာမည်သေချာမသိတဲ့ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက အတင်းဆန္ဒပြခိုင်းတာလဲ?? ၃၆။ လေးစားပါတယ် ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းနာမည်ပေးထားတဲ့ လူတွေကို လမ်းဘေးခြေနင်းဖက် မှာ တန်းစီချတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၃၇။ ပွဲလုပ်စရာ ခေါင်းစဉ်မရှိတိုင်း ဒီလို ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ whiteboard ပေါ် ချရေးပြီး ပွဲတွေလုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၃၈။ ကရင်အိကျီမချွတ်တဲ့...၊ ကရင်လူမျိုးတွေကို အရမ်းချစ်တဲ့ ကရင်မလေးက ဘာလို့ကရင်ပြည်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ သွားနေရတာလဲ?? ၃၉။ ဒီလူတွေက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေလား?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချစ်တဲ့ လူတွေလား?? သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းက ကရင်ပုံပေါက်ရဲ့လား?? နိုင်ငံခြားရောက်နေတာကို ခုမှ ဘာလို့ ကရင်ဝတ်စုံက ဝတ်ချင်ရတာလဲ?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချင်တဲ့ ဒီကရင်တွေကို ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ဘယ်သူအတင်းနေခိုင်းတာလဲ ၄၀။ ဒီလူတွေက ဘယ်နိုင်ငံက ဘာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေလဲ?? (ခြေအိပ်နက်နဲ့မွန်ဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ရှမ်းဝတ်စုံ၊ ကုတ်နဲ့ ကရင်ဝတ်စုံ၊ နက်ကတိုင်+ကုတ်+ရှူးနဲ့ ချင်းဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ကချင်ဝတ်စုံ) ၄၁။ ဒီမြန်မာလူငယ်တွေက ဘာလို့ ASS (ဖင်) လို့ ဒီမှာ လာရေးရတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါလား?? ၄၂။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဟော်ဟစ်ဆဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီလား ?? ၄၃။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ညစ်ညမ်းတဲ့ အပြုအမူကို လုပ်ပြတာ ဒီမိုကရေစီလား ?? ၄၄။ ဒါက ဘာလုပ်နေတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်ပဲလား?? ၄၅။ ဒီလူတွေကရော ဘာလုပ်ကြတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီ အတွက်ပဲလား?? ၄၆။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??
၄၇။ အရှက်မရှိ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်အော်တာ ဒီမိုကရေစီလား ?? ၄၈။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ?? ၄၉။ ဒီကောင်မလေး မဆုမွန် ကို ဘယ်သူက ဘုန်းကြီးနဲ့ အတင်းကြိုက်ခိုင်းတာလဲ?? ၅၀။ ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ဘယ်သူအတင်းရိုက်ပြီး ရုရှားကို သွားခိုင်းတာလဲ?? ၅၁။ ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ထိန်းခဲ့တဲ့ ငယ်နိုင် က အဲ့လိုနေဖို့ သင်ပေးလိုက်တာလား?? ၅၂။ ဒီလူတွေက ဘယ်အမျိုးနွယ်က ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ??
၅၃။ ဒီကလေးစစ်သားတွေက စစ်တပ်ကလား ?? ၅၄။ အဖေကို အရမ်းချစ်တဲ့ ဒီကောင်မလေးကို သူ့အဖေနဲ့ အဝေးကြီးမှာ ဘယ်သူက နေခိုင်းတာလဲ?? ၅၅။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ မတည့်တဲ့ မွတ်စလင်တွေက မြန်မာအတိုက်အခံတွေနဲ့ ဘာကြောင့် တည့်နေရတာလဲ??
၅၅။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ မတည့်တဲ့ မွတ်စလင်တွေက မြန်မာအတိုက်အခံတွေနဲ့ ဘာကြောင့် တည့်နေရတာလဲ??
၅၅။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ မတည့်တဲ့ မွတ်စလင်တွေက မြန်မာအတိုက်အခံတွေနဲ့ ဘာကြောင့် တည့်နေရတာလဲ?? ၅၆။ အလံသစ်ကို မကြိုက်လို့လမ်းလည်ခေါင်မှာ ချနင်းကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၅၇။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ ချနင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၅၇။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ချနင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၅၈။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ မီးရှို့တာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၅၈။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ မီးရှို့ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၅၉။ ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကိုတော့ ချနင်းပြီး သူများနိုင်ငံအလံကို လွှင့်ထူဆန္ဒပြတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၆၀။ ထမိန်ဝတ်နဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကို အမေရိကန်အလံ ဘယ်သူလွှင့်ခိုင်းထားတာလဲ?? ၆၁။ ဒီတိရစ္ဆာန်ကို ဘယ်သူတွေက အလံပေါ်တင်ပြီးလွှင့်ချင်နေကြတာလဲ?? ၆၂။ ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကို သူများနိုင်ငံသားတွေ ချနင်းအောင် ဘယ်သူတွေလုပ်နေကြတာလဲ?? ၆၃။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ မြန်မာဆိုတဲ့ သိက္ခာကို နိုင်ငံတကာကြားမှာ အရှက်ကွဲအောင်ဘယ်သူတွေလုပ်နေကြတာလဲ?? ၆၄။ ရုံးရောက် ဂတ်ရောက်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို အရှက်ရအောင်လုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? ၆၅။ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို အရှက်ရအောင် အမျိုးမျိုးလုပ်ပြီး ရသမျှ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ ပျော်ပါးစားသောက်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ ??